İhale İlanı : Halkapınar Loko Bakım Atelyesi Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması | RayHaber
[12 / 12 / 2019] Istanbul Channel သည် Marmara ပင်လယ်အဆုံးသတ်သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[12 / 12 / 2019] ရော်ဘာဘီးများဖြင့်အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို IMM စီစဉ်နေသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာလေလံပွဲလေလံခဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကူးပြောင်းခြင်းပြုလုပ်ခြင်း၏Halkapınar Loko ကို Maintenance
03 / 09 / 2018 လေလံခဲ, လေလံပွဲ, အထွေထွေ, Institute, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ, TCDD, တည်ဆောက်နေလေလံ
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကူးပြောင်းခြင်းပြုလုပ်ခြင်း၏Halkapınar Loko ကို Maintenance
ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရေတွက်ပြုသောအမှုHalkapınar Loko ကို Maintenance ဆိုင်ဓါတ်ငွေ့ကူးပြောင်းခြင်း 4734 ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အပိုဒ် 19 အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 427015
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်:0232 464 31 31 / 4921 -0232 464 77 98
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ငါ့အ mxnumx@outlook.co
ဂ) အစအဦးအလုပ်လုပ်: အ 10 ကာလ၌စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ.
က) Place: TCDD3။ Atatürk CAD ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ NO: 121 / A Alsancak- Host က / ÝZMÝR
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 25.09.2018 - 10: 00
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Yahşihanဘူတာရုံရှိမီးဘေး…
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက် - Aydınဘူတာနှင့်အိမ်ရာစီမံကိန်း၏သဘာဝဓာတ်ငွေ့…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya Loko ကို Maintenance အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတပ်ဦးနှင့်နောက် ...
Halkapınar-EIA ကိုအတည်ပြုချက် Metro ဘတ်စ်ကားဘူတာအဘို့ပေးထားခဲ့သည်
İzmir Metro မှမသန်စွမ်းသူများအတွက်Halkapınarမက်ထရို…
အကူးအပြောင်းအတွက်Halkapınarအတွက် Streetcar Mansion Row
ကိုကိုအဂ်လာ - "ဟီလာကပီနာ - ဘတ်စ်ကားဘူတာမြေအောက်ရထားဖြင့် Izmir"
Stationzmir ရှိဘတ်စ်ကားဂိတ် - Halkapınarမြေအောက်ရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ...
Eryaman သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံဆက်သွယ်မှု Hizmet
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ31928 Kütahya-Tavsanli လိုင်း
Cengiz ဆောက်လုပ်ရေးသည်ဆလိုဗေးနီးယား Karawanken ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
Istanbul Metropolitan Municipality မှ 420 ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု
TÜBİTAK Bilgem İltarenသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀ န်ထမ်းများကိုခန့်ထားလိမ့်မည်
Manisa Celal Bayar တက္ကသိုလ်သည်ပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်လိမ့်မည်